निकास प्रणाली - कुनै पनि कार को एक आवश्यक तत्व। कि यो आफ्नो विषाक्तता, हल्ला र तापमान कम, ग्याँसहरु को सजिलो निकासी प्रदान गर्दछ। उत्प्रेरक, resonators र अन्य घटक गर्न साथै, निकास प्रणाली मा उपलब्ध छ। उहाँले श्रृंखला मा अन्तिम लिंक एक प्रकारको छ, र ध्वनिक फिल्टर समारोह कार्य गर्दछ। तर मफलर मार्फत बाल्न tends। कहिलेकाहीं प्वाल वेल्डिंग द्वारा मरम्मत वा नयाँ सम्भव छैन संग वस्तु प्रतिस्थापन गर्नुहोस्। त्यसपछि उहाँले मफलर लागि सहायता सीलेंट गर्न आउँछ। यसले निकास मार्गमा वस्तु मर्मत गर्न समय एक न्यूनतम खर्च ठूलो तरिका हो।
यो मफलर निरन्तर आक्रामक प्रभाव उजागर गरिएको छ। यो चिस्यान, यात्रा एजेन्ट, ठूलो तापमान swings। साथै, तत्व बलियो कंपन उजागर छ भित्र। यस कारण, विभाजन नै "बैंक" यसको पूर्व बल हराउछ। फलस्वरूप, यस weakest बिन्दुमा burnout उत्पादन। दुर्लभ अवस्थामा मा, दरार पाइप नै। यो अक्सर resonator वा उत्प्रेरक मिश्रित को क्षेत्रमा हुन्छ।
को क्षति निर्धारण धेरै सरल छ। त्यहाँ मफलर मा burnout थियो भने, यो अब बाहिर ध्वनि छालहरू गर्नेछन्। ग्याँसहरु ध्वनिक baffles परहेज, सबभन्दा छोटो मार्ग मार्फत बाहिर लीक हुनेछ। वास्तवमा, यो एक ठूलो निकास सँगसँगै छ।
को सीलेंट को गुण
के मफलर लागि सीलेंट बनाउँछ? आवेदन पछि ठोस रूप हुन्छ र ग्याँस बाहिर लीक गर्न अनुमति छैन जो यो संरचना। यो तरल प्याच, सामान्यतः एउटा अस्थायी मर्मत रूपमा प्रयोग भएको छ जो एक प्रकारको छ। सीलेंट पारंपरिक टास्ने देखि मात्र होइन बनावट, तर पनि विशेषताहरु अलग छ। त्यसैले, यो धेरै प्रतिरोधी छ। सिलिकन सीलेंट 1300 ° वा बढी सी मा यसको संरचना कायम गर्न सक्षम छ। यसलाई चर्किएको को मरम्मत को लागि जडान अंक रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ, र burnout को क्षेत्र मा। को सीलेंट ध्वनि कंपन को डर बिना चिस्यान र पानी प्रतिरोधी छ। यो पनि धातु स्ट्रिप्स को एक एनालग रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। हाल चाँडै थाक्नु र backlash कारण। को सीलेंट पनि भागहरु बलियो दबाव दिन्छ र एक लामो समय को लागि आफ्नो गुण परिवर्तन गर्दैन।
प्रयोगको लागि निर्देशन एकदम सरल छ। माटो बाट पर्याप्त सफा क्षतिग्रस्त सतह र ट्यूब देखि संरचना लागू हुन्छ। हटाउन जंग आवश्यक छैन - धेरै निर्माताहरु खिया सतह मा लागू हुन सक्छ। यो संरचना पूर्ण एक जलाए-बाहिर प्वाल ढाकिएको छ महत्त्वपूर्ण छ। गर्मी प्रतिरोधी सिलिकन सीलेंट एक ठोस नजर प्राप्त हुनेछ रूपमा अर्को, तपाईंले लामो प्रतीक्षा गर्न आवश्यक छ। 30 मिनेट देखि2घण्टा - प्रत्येक निर्माता यो समय फरक छ। पूर्ण उपचार +20 ° सी को एक तापमान बारेमा एक दिन को लागि रहन्छ को मफलर लागि कस्तो सीलेंट चयन गर्न राम्रो छ? हामी घरेलू बजार मा प्रयोग गरिन्छ कि सबै भन्दा लोकप्रिय उत्पादनहरु सूची संकलित छन् तल, यो प्रश्नको जवाफ।
यो एक धेरै चिरपरिचित जर्मन कम्पनी लामो यसको गुणस्तर उत्पादन सिद्ध छ छ। दृढ "LIquI Moli" silencing लागि राम्रो Sealants उत्पादन गर्छ। उत्पादन ध्वनि इन्सुलेशन सुधार गर्न र जोडहरुमा जंग रोक्न डिजाइन गरिएको छ। 1400 ° सी मा एक तापमान अप मा निकास ग्याँसहरु दबाब सामना गर्न सक्छन् भन्ने मफलर लागि यो माटोको सीलेंट मूल्य 150-ग्राम ट्यूब 400 rubles छ।
सीआरसी सिलिकन सीलेंट
यो सायद उच्च तापमान निकास लागि सबैभन्दा छिटो-सुखाने सीलेंट छ। उहाँले "निष्क्रिय" गर्न इन्जिन को सञ्चालनको 10 मिनेट पछि कठोर हुन्छ। लागि ट्रान्जिट वा बस सील चर्किएको लागि क्षति मर्मत ठूलो। यो तापमान अप 1300 डिग्री गर्न मा संचालित र अनधिकृत निस्कनुहोस् बाहिरबाट ग्याँसहरु विरुद्ध उच्च गुणस्तरीय ध्वनि इन्सुलेशन र सुरक्षा प्रदान गर्दछ। कम्पन, पानी र रसायन को डर छैन। समीक्षा द्वारा न्याय, यो Sealants को लाइन मा सबै भन्दा राम्रो उत्पादनहरु मध्ये एक छ। लागत प्रति 200 ग्राम 400 rubles छ। साथै, यो कम्पनी ठंडा प्रणाली र टायर को आपतकालीन मर्मत लागि छाप उत्पादन गर्छ।
को संरचना 1000 ° सी सम्म हीटिंग सामना गर्न सक्छन् जो फिलर एक प्रकारको छ पाइप जोइन्टहरूमा, silencers र resonators सील लागि उपयुक्त। सीधा प्रभावित क्षेत्र लागू, पहिले माटो र खियाले देखि साफ। यो 30 मिनेट पछि कठोर हुन्छ। ट्यूब 200 ग्राम वजन को लागत 290 rubles छ।
रूस मा एक धेरै लोकप्रिय उत्पादन। 150 ग्राम को ट्यूब वजन 170-200 rubles को लागि किनेको गर्न सकिन्छ। निर्माता एक रूप संरचना वर्णन "मफलर सिमेन्ट।" एक वास्तविक पत्थर मा एक पेस्ट देखि कायापलट छोटो समयको लागि उत्पादन। यसलाई 1100 ° सी मा तापमान withstands को catalytic कनवर्टर सहित निकास प्रणाली को सबै भागहरु को मरम्मत को लागि उपयुक्त।
त्यसैले, हामी एक सीलेंट को मफलर छ कि फेला परेन। वेल्डिंग मिसिन को संलग्नता बिना क्षतिग्रस्त क्षेत्र चाँडै यस उपकरण संग मरम्मत गर्न सकिन्छ। यसबाहेक, टूटना को मफलर ठाउँ हटाउने बिना स्थानीय समाधान गर्न सकिन्छ। यो धेरै सुविधाजनक र छिटो छ।
फिएट 127 कार को इतिहास को एक संक्षिप्त सिंहावलोकन
बीएमडब्ल्यू 1 श्रृंखला एक गोल्फ वर्ग को एक hatchback को दुनिया हठी maneuverability छ
संसारमा सबैभन्दा लामो कार, र फोटो को लम्बाइ। सबै भन्दा ठूलो कार
बीएमडब्ल्यू X5M: मोडेल को एक विस्तृत विवरण
एयर निलम्बन: काम सिद्धान्त, यन्त्र, को फाइदा र बेफाइदा वास्तविक मालिक। कार एयर निलम्बन किरा
सुन कसरी सफा गर्न: सुविधाहरू, व्यावहारिक सल्लाह र समीक्षा
गायक Inna: जीवनी, उज्ज्वल केटी बारेमा रोचक तथ्य
मास्को नजिकै अद्वितीय प्राकृतिक रिसोर्ट - रूस को गर्व
यूजीसी - डिकोड। अनुरूप यूजीसी: नियुक्ति र donning लागि प्रक्रिया
गोंद "Bustilat": विशेषताहरु, आवेदन
आपराधिक दायित्व आधार: दार्शनिक र कानुनी पक्षहरू
Phycology - शैवाल को विज्ञान। प्रकार र शैवाल को विशेषताहरु
Ateroklefit: प्रयोगको लागि निर्देशन